अब बैंकबाट यसरि पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण, लिने तरिका यस्तो छ ! - jagritikhabar.com
बैंकबाट पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋणकाठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले पेशागत कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । सपनालाई एउटा नयाँ उडानः पेशागत कर्जा, बिना धितो नारासहित बैंकले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
योजना अनुसार न्यनुतम व्याजदरमा विना धितो १५ लाख सम्मको कर्जा दिने बैंकले दिने भएको छ । काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले पेशागत कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । सपनालाई एउटा नयाँ उडानः पेशागत कर्जा, बिना धितो नारासहित बैंकले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । योजना अनुसार न्यनुतम व्याजदरमा विना धितो १५ लाख सम्मको कर्जा दिने बैंकले दिने भएको छ ।
ग्राहकको सेवामा आफ्नो जिम्मेबारीलाई प्रभावकारी बनाउँदै गरिमाले १५ लाखसम्मको कर्जा लगायत दुर्घटना बीमा, जीवन बीमाको सुविधा समेत लिन सक्ने बताईएको छ । यो कर्जा सुविधा कस्ता कर्मचारीले लिन पाउँछन् ?
१. चार्टड एकाउन्टेनहरु –क्ष्ऋब्ल्) का सदस्यता प्राप्त २. डाक्टरहरु (नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्विकृत प्राप्त व्यक्तिहरु) ३. ईन्जीनियरहरु (नेपाल ईजिनियरिङ काउन्सिलबाट स्विकृत प्राप्त व्यक्तिहरु) ४. शिक्षकहरु (नेपाल सरकारका स्थायी शिक्षकहरु तथा विश्वविद्यालयहरुमा कार्यरत स्थायी प्राध्यापकहरु)
५.बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरु ६. नेपाल सकारका स्थायी कर्मचारीहरु ७. सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरु ८. लाइसेन्स प्राप्त पाईलटहरु
तारा एयरको विमान दुर्घटनाको बारेमा बोलिन धर्तीमाता भन्छिन् अझै छन् देशमा यस्ता खतराहरु । सम्पूर्ण कुरा तलको भिडियोमा राखीएको छ। यो पनि हेर्नु होस्।
मुगु, २१ जेठ-मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको यार्सा सङ्‍कलन क्षेत्रमा लेक लागेर दुई दिनको अन्तरालमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मुगम कार्मारोङ गाउँपालिका–७ महगाउँका १६ वर्षीय असल तामाङको शुक्रबार दिउँसो लेक लागेर मृत्यु भएको हो ।उनी मङ्ंग्री गाउँस्थित बुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा– ९ मा अध्ययनरत थिए । पैसा कमाउन अध्ययन छाडेर टाके पाटन क्षेत्रमा उनी यार्सा टिप्‍न गएका थिए ।
तर, लेक लागेर सिकिस्त बिरामी भएका थिए । उनलाई बोकेर घरतर्फ ल्याउँदै गर्दा छोटेचौर भन्ने स्थानमा मुत्यु भउको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका– ७ का वडा अध्यक्ष शशांक लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि बुधबार राजबहादुर सिंहको लेक लागेर मृत्यु भएको थियो ।
उनी यार्सा सङ्‍कलकको सुरक्षार्थ खटिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार हुन् । उनलाई कोइकी पाटनमा लेक लागेको थियो । लेक लागेपछि थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी उनलाई कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो ।
उनको त्यहाँ उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सुवास हमालले बताए ।र्सा टिप्‍न जाँदा ‘हाईअल्टिच्युड’का कारण लेक लागेर बिरामी हुने र तत्कालै उद्धार तथा औषधी उपचार नहुँदा वर्षेनी अकालमा धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यार्सा टिप्‍न भन्दै ज्यानको बाजी थापेर समुद्री सतहदेखि करिब ४५ सयदेखि ५५ मिटर उचाइको हिमरेखा क्षेत्रमा सर्वसाधारण यार्सा सङ्‍कलन गर्न जाने गरेका छन् ।